Vanim-potoana Big Shot 2: Fanavaozana farany, Cast, Plot, Trailers & Spoiler ho an'ny 2022! - Fialam-Boly
Vanim-potoana Big Shot 2: Fanavaozana farany, Cast, Plot, Trailers & Spoiler ho an'ny 2022!
Ho foana ve ny Big Shot?
Rahoviana no hivoaka ny Season 2 amin'ny Big Shot?
Inona no nitranga tamin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny Big Shot?
(Spoilers ho an'ny Big Shot Season 1 mialoha!)
Iza no ao amin'ny mpilalao Big Shot?
Jessalyn Gilsig ho mpanazatra mpanampy Holly Barrett
Richard Robichaux ho George Pappas
Yvette Nicole Brown ho Sherilyn Thomas
Sophia Mitri Schloss ho Emma Korn
Nell Verlaque as Louise Gruzinsky
Tiana Le as Destiny Winters
Tisha Eve Custodio ho Carolyn Mouse Smith
Cricket Wampler ho Samantha Giggles Finkman
Monique Green ho Olive Cooper
Misy mpandroba ve ny Big Shot Season 2?
Aiza no misy ny Big Shot?
Misy tranofiara ho an'ny Big Shot Season 2 ve?
Firy ny totalin'ny fizarana amin'ny Big Shot?
Aiza no ahitanao ny Big Shot Season 2 ao amin'ny Netflix?
Tifitra lehibe vanim-potoana 2-Ny mpanazatra basikety misafoaka izay manipy seza amin'ny mpitsara dia mety tsy ho toy ny karazana lehilahy tianao hiarahana, mainka fa ho mpanazatra amin'ny sekoly ambony vehivavy sangany. Na izany aza, misy ny fahafahana hitombo hankafy azy rehefa mandroso ny andiany Disney + Big Shot — ary tsy hoe satria nilalao an'i John Stamos izy.
Ny zava-misy fa ny Big Shot, izay ganagana Mighty/Ligy an'ny trano fiompiana sy fanavotana azy ireo, dia tsy hatsikana ara-teknika, na dia manana singa mahatsikaiky aza, angamba no mahagaga lehibe indrindra. David E. Kelley dia mpiara-mamorona ny fampisehoana. (Ity ihany no Kelley izay namorona an'i Ally McBeal, Doogie Howser, The Practice, Big Little Lies, ary fampisehoana lehibe hafa.)
Tsy Sesame Street na Breaking Bad ity. Tamin'ny tafatafa tamin'ny volana Jona, Stamos, izay milalao Mpanazatra Marvyn Korn, dia nilaza hoe, Any amin'ny toerana afovoany io, ary tena tsara. Raha tokony ho saro-kenatra ity seho ity dia mameno azy amin'ny fangorahana. Fampisehoana tena mafana sy avy amin'ny fo izay tsy dia mamy loatra na mampihetsi-po, hoy izy.
Na dia marina aza izany, i Korn dia tsy toetra tsara sy malefaka amin'ny vanim-potoana 1 amin'ny Big Shot. Tonga tao amin'ny Sekolin'i Westbrook ho an'ny zazavavy izy taorian'ny nandroahana azy tamin'ny asa NCAA malaza ary tsy nanomboka tamin'ny fanombohana tsara niaraka tamin'ny ekipany vaovao, nilaza tamin'ny iray amin'ireo mpilalaony fa mila mandatsaka kilao dimy izy. Inona no navaliny? Nandre ny rehetra fa psycho ianao. Diso hevitra izy ireo. Tsy inona fa mpampijaly.
I Korn kosa dia manomboka mivondrona, lasa mpanoro hevitra kokoa ary tsy mpiandraikitra ny asa rehefa mametraka fifandraisana amin'ireo mpilalaony. Na ny zanany vavy kely, izay nifindra tany (ary nankany Westbrook!) Rehefa niasa tany Italia ny reniny (vadin'i Korn taloha) dia nianatra ny ho ray tsara kokoa. Ny mpanazatra Korn dia lasa ilay lehilahy niriany mangingina foana ary ilay rainy tsy nananany mihitsy, araka ny filazan'i Disney.
Ny Big Shot dia nalaza tamin'ny mpankafy sy ny mpitsikera, ary ny iray niantso azy io ho iray amin'ireo seho Disney + tany am-boalohany lehibe indrindra tamin'ny taona 2021. Ny antony iray mahatonga izany dia ny hoe mihoatra noho ny Korn ihany ilay fandaharana; momba ireo zatovovavy izay tarihiny koa izany. Ao an-kianja sy ivelan’ny kianja dia mirakitra ny fiainan’izy ireo ny seho. Mikasika ny tovovavy mahita ny feony sy manao tsinontsinona izay tadiaviny eo amin'ny fiainana izany, hoy i Yvette Nicole Brown, izay mitendry ny dekan'ny sekoly, manazava.
Ny antony iray hafa amin'ny fahombiazan'ny fampisehoana dia mety ho ny fananana fampisehoana mifantoka amin'ny tanora atleta vehivavy dia mbola tsy fahita, na dia amin'izao fotoana izao aza, ary ny zatovovavy ao amin'ny Westbrook Sirens dia tsy maintsy nampianatra ny tenany ny fomba filalaovana. Tsy nisy hosoka izany. Nisy ampahany izay tiako ho tsy marina, fa izany, hoy ny mpilalao sarimihetsika Nell Verlaque niaiky tamin'ny Aprily 2021.
Disney dia nanamafy fa ny Big Shot Season 2 dia eo amin'ny asa amin'ny Septambra 2. Stamos dia faly. Amin'ny fotony, Big Shot dia momba ny gut sy ny fo, ary Disney + dia naneho fa tamin'ny fanomezana antsika vanim-potoana faharoa, Stamos nanoratra tao amin'ny Instagram, maneho fankasitrahana ho an'ireo mpankafy sy mpitsikera. Tena faly aho hanohy ny filalaovana Coach Korn, lehilahy iray izay mianatra mamela ny fitsarana efa noheverina ary mianatra avy amin'ny vondrona vehivavy mahafinaritra, izay manampy azy ho matotra sy hitombo, hoy ihany izy taty aoriana. Na izany aza, mbola manana zavatra betsaka ianarana izy… Soa ihany fa hanome izany fahafahana izany ny Season 2.
Lahatsoratra nozarain'i John Stamos (@johnstamos)
Tohizo ny famakiana hianarana ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny vanim-potoana 2 amin'ny Big Shot.
Faly ireo mpankafy nahita izay nanjo an'i Korn sy ny ekipany rehefa vita ny vanim-potoana 1 tamin'ny volana Jona, ka rehefa tsy nisy vaovao fanavaozana nandritra ny herinandro maromaro, dia nanahy izy ireo fa nofoanana ny andiany. Ny Stamos kosa nifikitra tamin’ny fanantenana. Nanamarika i Stamos tamin'izany fotoana izany, manana fahatsapana tsara momba ny fiverenana aho, saingy aloha loatra izany. Soa ihany fa nanamafy i Disney tamin'ny volana septambra fa hiverina ny fampisehoana — ary eny ny valiny!
Tsy fantatra hoe rahoviana no hiseho voalohany ny Big Shot Season 2, indrindra raha heverina fa tsy hatomboka hatramin'ny 2022 ny horonan-tsary.
Ny mpanazatra Marvyn Korn dia nesorina tamin'ny toeran'ny mpanazatra NCAA rehefa avy nanipy seza teo amin'ny mpitsara, noho izany dia nanaiky ho mpanazatra tao Westbrook, sekoly ambaratonga faharoa tsy miankina ho an'ny zazavavy rehetra izy. Ny fihetsiny henjana dia tsy mahasarika azy amin'ny atleta. Rehefa nahazo asa tany Italia ny renin'i Korn dia tonga niara-nipetraka taminy manontolo andro i Emma zanany vavy. Manalefaka tsikelikely ny ivelany mafy i Korn ary manomboka mamorona fifandraisana matanjaka kokoa. Ny olona dia manamarika ny fanatsarana ny Westbrook Sirens eo amin'ny kianja, anisan'izany ny University of California, Santa Barbara (UCSB). Tahaka ny fiomanana amin'ny lalao goavana hanoherana ny Carlsbad Cobras ny Sirens, dia manome toerana mpanazatra azy ny sekoly. Ny mpanazatra Korn dia mila mamorona lalao vaovao, anisan'izany ny iray nantsoiny hoe Sacrifice Play, rehefa tsy hita ny bokin'i Siren ary niahiahy an'i Carlsbad izy ireo.
Vakio ihany koa - Crash Landing on You Season 2: Daty famoahana: Cast, plot, Trailers, & Spoilers ho an'ny 2022!
Nolavin'ny mpanazatra Korn ny tolotra asa UCSB fa nisafidy ny hijanona ao Westbrook kosa. Nanapa-kevitra ny hamolavola kilalao vaovao ho an'ny ekipa aho, izay nataoko, hoy izy talohan'ny lalao lehibe, saingy niafara tamin'ny famolavolana vaovao ho an'ny tenako aho. Nanolo-kevitra ny hilalao tsy misy mpanohana ny mpanazatra Korn noho ny hatsikana maro natao hanesorana ireo Sirens amin'ny lalaony (anisan'izany ny andiam-tantely miditra ao amin'ny gym!). Ny totozy dia manipy ny harona mpandresy ao anaty fantsika rehefa avy nampiasa ny Sacrifice Play.
Iza no mpilalao ao amin'ny Big Shot?
Stamos, izay malaza indrindra amin'ny anjara asany amin'ny maha Dadatoa Jessie ao amin'ny franchise Full House, dia tsy nanantena ny hilalao Coach Korn mihitsy. Nihevitra ny tenany ho mitana anjara toerana maizina kokoa izy, mety ho mpisolovava, rehefa nahafantatra momba ilay fampisehoana vaovao David E. Kelley izay ho anisany. Mbola tsy mpanao fanatanjahantena mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Nilaza tamin'i Collider izy tamin'ny fiandohan'ity taona ity, tsy mbola nanao fanatanjahan-tena na nijery fanatanjahantena aho.
Vakio ihany koa - Fitiavana Fiainana vanim-potoana 3: Daty Famotsorana: Mpilalao, Tetikasa, Hevitra, Trailer, & Spoiler ho an'ny 2022!
Soa ihany fa nahomby izy - ary faly i Kelley fa nokaramaina i Stamos. Nanohina ny fon'ny maro ny fahaizan'i John Stamos amin'ny maha-Coach Marvyn Korn, indrindra indrindra, hoy ny mpanoratra/mpamokatra. Ny Big Shot Season 2 dia mazava ho azy fa hanasongadina an'i Stamos, ary toa ireto mpilalao manaraka avy amin'ny vanim-potoana 1 ireto no ho anisan'ireo miaraka aminy:
Jessalyn Gilsig toy nyMpanazatra mpanampy Holly Barrett
Richard Robichauxtoy nyGeorge Pappas
Yvette Nicole Browntoy nySherilyn Thomas
Sophia Mitri Schlosstoy nyEmma Korn
Nell Verlaquetoy nyLouise Gruzinsky
Tiana Letoy nyDestiny Winters
Tisha Eve Custodiantoy nyCarolyn Mouse Smith
Cricket Wamplertoy nySamantha Giggles Finkman
Monique Greentoy nyOlive Cooper
Tsy mbola nisy mpandroba Big Shot Season 2 navoaka, fa betsaka ny vinavina momba ny mety hitranga manaraka. (Indray, mpanimba vanim-potoana 1 mialoha!)
Hitohy ho sekoly ambaratonga faharoa ao amin'ny Division II i Westbrook rehefa nandresy an'i Carlsbad tamin'ny fanokafana ny taom-pilalaovana. Ekipa sy mpilalao basikety vaovao no hipoitra vokatry ny fanitsiana, ary koa ny sakana amin'ny lalao sarotra kokoa. Ho afaka hitazona ny maha ekipan’ny Diviziona II azy ve izy ireo?
Vakio ihany koa - Sexlife vanim-potoana 2: Daty famoahana: Inona no fantatsika hatreto momba ity andiany ity!
Ny fehin-kevitry ny vanim-potoana 1 dia nanambara ihany koa fa ny Mpanazatra mpanampy Holly dia handray ny ho mpanazatra vaovao ao amin'ny Carlsbad, ekipa izay saika resin'ny Westbrook Sirens. Midika izany fa azo atao ny lalao miverina amin'i Westbrook, izay mety ho toe-javatra mampidi-doza ho an'ny antoko rehetra voakasik'izany.
Raha toa ny Westbrook Sirens toa milalao amin'ny tena sekoly ambaratonga faharoa, Big Shot dia voatifitra tao amin'ny Paramount Lot any Los Angeles, Kalifornia. Ny COVID-19 dia nanimba ny set, izay voatery nakatona imbetsaka noho ny fitsapana COVID tsara. Tamin'ny Janoary, hoy i Stamos nanamarika hoe, Natory omaly alina ny zanako lahy nitomany ary nifoha nitomany satria tsy afaka niaraka tamin-drainy. Misaotra noho ny asa iray aho; fitahiana izany amin'izao fotoana izao. Fanintelony aho no voan'ny virus, ary tsy maintsy mitoka-monina mandritra ny folo andro!
Tao amin'ny Twitter, nandrisika ny olona handray an-tanana ny valan'aretina i Stamos. Nanoratra izy hoe, tsapako fa ny asako dia manao izay rehetra azony atao mba hiarovana antsika. Na izany aza, araho ny fitsipika; ny zavatra ataonao dia misy vokany lehibe izay miantraika amin'ny fiainana bebe kokoa noho ny anao. Misaotra.
Tsapako fa ny asako dia manao izay azony atao mba hiarovana anay. Fa ry olona, ​​araho ny fitsipika - ny fihetsikao dia misy fiantraikany amin'ny fiainanao bebe kokoa noho ny anao. MISAOTRA
— John Stamos (@JohnStamos) 29 Janoary 2021
Ny vanim-potoana 2 dia tsy mbola nalaina sary, ka tsia. Na izany aza, nisy ny teaser hampiroboroboana ny vanim-potoana manaraka, izay niseho voalohany tamin'ny 2 Septambra. Ao anatin'izany, i Stamos dia manambara fa havaozina amin'ny vanim-potoana faharoa ny fampisehoana raha manao harona izy. Nahita sary marobe izy talohan'ny niangavy an'i Disney + hanavao ny fampisehoana. Misy karatra anaram-boninahitra miseho eo amin'ny efijery, manondro fa hivoaka tsy ho ela ny Season 2.
Ny Big Shot dia nanana fizarana folo tamin'ny vanim-potoana voalohany, nanomboka tamin'ny 43 minitra ka hatramin'ny 54 minitra, ary ny famaranana ny vanim-potoana no lava indrindra.
Ny vanim-potoana 2 amin'ny Big Shot dia ho hita ao amin'ny Disney + irery ihany, izay ahafahanao mijery ny vanim-potoana 1 amin'ny fampisehoana.
Ny vanim-potoana voafidy 3: Daty famoahana: Nohavaozina sa nofoanana?
Dark Desire Season 3: Miverina ve? Havaozina na nofoanana!
mijery fizarana amin'ny fahitalavitra mivantana maimaim-poana
Ahoana ny famoahana ny fisoratana anarana amin'ny netflix amin'ny iphone
ny fomba fanovana ny solonanarana amin'ny reddit
youtube ho mp3 amin'ny android
mijery sarimihetsika vao nivoaka tamin'ny Internet maimaim-poana nefa tsy misintona
lisitra kaody fanomezana xbox maimaim-poana